Tilmaamaha iyo Tabaha loogu talagalay Internetka - Golaha Moobilka | Golaha Moobaylka (Bogga 2)
Ethernet ma laha qaabayn IP sax ah: maxaa la sameeyaa?
Haddii farriinta "Ethernet aysan lahayn qaabeyn IP sax ah" ayaa soo muuqanaysa, wax baa ka qaldan xiriirka. Tani waa xalka.
Waxaan ku tusaynaa liiska ciyaaraha Google ee aad ku ciyaari karto lacag la'aan adiga oo sameeya baaritaan fudud.
Sida loo ogaado haddii xiriir laga tirtiray WhatsApp
Waxaa jira hab lagu ogaanayo haddii xiriir laga tirtiray WhatsApp. Taasina waa waxa aan halkaan ku arki doonno.
Waa maxay sababta aadan ugu adeegsan Safari daaqadaha
Ma rabtaa inaad ogaato haddii ay habboon tahay in safari lagu isticmaalo Windows maanta? Waxaan ku sharxeynaa haddii ay mudan tahay iyo in kale maqaalkan.
Waa kuwee hawlwadeennada bixiya 5G gudaha Spain iyo meelahee? Soo hel gobollada aad ku raaxeysan karto dhammaan faa'iidooyinka 5G
Akhristaha ugu caansan e-akhriska adduunka ayaa leh faa'iidooyin badan, laakiin sidoo kale xoogaa dhibaatooyin kale ah, sida marka PC-gaagu uusan aqoonsanayn Kindle.
Ma garanaysid sida loo habeeyo Tiscali Mail? Waxaan kaa caawineynaa inaad ku sameyso dhammaan aaladahaaga dhowr tallaabo oo fudud oo la raaco. Waxba ma qaadato.
Ma jeclaan lahayd inaad tirtirto koontadaada Aliexpress? Waxaan ku tuseynaa talaabo talaabo leh hage fudud sida xogtaada looga tirtiro mareegaha.
Sida loo suurogeliyo isku -duubnaanta faylka iyo galka Windows
Waxaan sharxaynaa hababka ugu fiican ee suurtogalinaya in faylka iyo isku -duubnaanta faylka ee Windows si loo badbaadiyo boos kombiyuutarkaaga.
Immisa ayaa laga qaadaa TikTok? Saameeyayaal dhowr ah ayaa muujinaya
Saameeyayaal dhowr ah ayaa ugu dambayn daaha ka qaaday inta TikTok laga qaadayo si ay u soo geliyaan fiidyowyo iyo waxyaabaha ay kafaala qaaday shabakadda bulshada.
Waxa la sameeyo marka farriin ka soo baxdo shaashadahayaga: "SecureLine VPN server ayaa diiday faylkaaga liisanka"
Haddii aad rabto inaad awooddo inaad bixiso adoo adeegsanaya koontadaada PayPal ee Amazon, kuwani waa labada hab ee aan adeegsan karno.
Sida loo helo ama dib loogu habeeyo eraygaaga sirta ah ee Gmail
Haddii aad rabto inaad soo ceshato eraygaaga sirta ah ee Gmail, maqaalkan waxaan ku tusaynaa sidaad u samayn karto
Sedlauncher: waxa ay tahay iyo waxa loogu talagalay
Qoraalkan waxaan isku dayi doonnaa inaan ku sharraxno wax walba oo ku saabsan Sedlauncher: waxa ay tahay, waxa loogu talagalay iyo haddii ay runtii lagama maarmaan tahay in la sameeyo la'aanteed
Astaamaha Roblox: sida loo helo midabyo badan iyo avatars cusub
Miyaad jeceshahay inaad u hesho alaab lacag la'aan ah avatars -ka Roblox? Waxaan ku baraynaa sida loo helo dhar, dhaqdhaqaaqyo iyo gebi ahaanba bilaash.
Tilmaan -bixiyahan waxaan kuugu reebaynaa toddobada taxane ee anime ee ugu wanaagsan oo la heli karo si aad uga daawato Hulu, oo ah madal qulqulka caanka ah.
Waxaan soo bandhignaa xoogaa layliyo fudud oo waxtar leh si loogu qoro kombiyuutarka, kor loogu qaado tayada qoraalladaada iyo xawaaraha qoraalka
Fiiri xulashadeena oo hel barnaamijka ugu fiican ee lagu sameeyo montages sawirrada kombiyuutarkaaga
Haddii aad rabto inaad aragto South Park, waxaan kuu sheegi doonnaa meesha aad ka arki karto dhammaan xilliyada taxanaha firfircoon ee Spain.
Khilaafku Ma Furmi Doono: Maxaa Dhacaya Iyo Sida Loo Hagaajiyo?
Haddii aadan furi karin oo adeegsan karin barnaamijka Discord, waxaan kugula talinayaa inaad eegto maqaalkan si aad u hesho xalka.
Glovo Prime: Waa maxay faa'iidooyinka aad leedahay marka la barbar dhigo bilaashka?
Glovo Prime runtii ma u qalantaa? Waa hagaag, waxay kuxirantahay dhowr arrimood maadaama aannaan dalban karin ugu yaraan 10 euro tusaale ahaan
Fikradaha eneba: ma lagu kalsoonaan karaa in la iibsado oo la iibiyo ciyaaraha fiidiyaha?
Haddii aad gaadhay maqaalkan, waa sababta oo ah waxaad la yaabtay haddii madasha eneba run ahaantii la aamini karo iyo in kale. Maqaalkan waxaan kaaga soo saarnaa shakigaaga
Waa dhibsasho iyo dhibaato caadi ah markaan isticmaaleyno Windows 10 ... Waxaan sharxeynaa sida loo sameeyo si uusan kumbuyuutarku u joojin
Khalad 5000 Twitch: maxaa loola jeedaa oo maxaad samaynaysaa?
Ma ku heshay qaladka 5000 Twitch shaashaddaada markaad daawanayso durdur? Waxaan kaa caawinaynaa inaad ku xalliso dhowr tallaabo oo fudud.
Browserkaaga Avast Secure Browser kaligiis ma bilaabaa? Waxaan ku xallin doonnaa hab aad u fudud oo aad ku samayn doonto wax ka yar 5 daqiiqo.
Haddii aad ka daashay Twitch oo aad u malaynayso in la gaadhay waqtigii la tirtiri lahaa koontada madalkan, adoo raacaya tillaabooyinkan waad gaadhi doontaa
Bogga shabakadda ayaa hoos u dhigaya biraawsarkaaga Firefox: waa maxay iyo sida loo hagaajiyo?
Ma waxaad tahay isticmaale Firefox? Markaa waxaa laga yaabaa inaad ogtahay qaladka bogga intarneedka inuu hoos u dhigayo biraawsarkaaga Firefox. Waan kaa caawineynaa.
Haddii aadan rabin in qof kasta oo gala taleefankaaga uu ogaado cidda aad ilaalinayso ilaalinta, maqaalkan waxaan kaa caawineynaa inaad gaarto
Kuwani waa qaar ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan youtubers -ka ee naga caawin kara inaan ku guulaysanno YouTube -ka.
Haddii aad raadinayso subtitles si aad u soo dejiso, maqaalkan waxaan ku tusaynaa xulashooyinka ugu fiican Isbaanish iyo lacag la'aan
Maaddaama ay sii kordhayso liisaska qulqulka aaladaha fiidiyaha, way sii adkaanaysaa in wax loo helo ...
Sida loo dhoofiyo bookmarks Google Chrome on your Android
Ma jeclaan lahayd inaad awood u yeelato inaad ku dhoofiso Bookmarks Chrome -ka Android? Kadibna waxaan sharxi doonnaa habab kala duwan si aan u gaarno.
Waa maxay barnaamijka ugu wanaagsan ee lagu wanaajin karo PC -gaaga bilaashka iyo Isbaanishka
Miyuu kombiyuutarkaagu aad u gaabiyaa? Waxaan kuu sharxeynaa barnaamijka ugu fiican ee lagu hagaajin karo PC -ga Isbaanishka oo lacag la'aan ah
PC -gaagu miyuu ku siiyaa qaladka ah in nidaamku uusan heli karin waddada la cayimay? Markaas ayaan kuu heli karnaa xalka.
Miyaad ku ciyaartaa ciyaaraha fiidiyowga kombuyuutarkaaga? Markaa waxaad dooni doontaa inaad hagaajiso cayaaraha si aad u ciyaarto oo aad waxqabad badan uga hesho kombiyuutarkaaga. Waxaan halkaan ku bari.
Sida loo xisaabiyo leexashada heerka ee Excel
Waxaan sharxaynaa sida loo xisaabiyo leexashada heerka ee Excel iyo codsiyada wax ku oolka ah ee xisaabtan na siinayo
Maxay fiidiyowyada Youtube keligood u joojiyaan?
Maxay fiidiyowyada Youtube keligood u joojiyaan? Waxaan ku tusaynaa sababaha iyo xalalka suurtagalka ah ee dhibaatadan xanaaqsan
Waxaan ku tusinaynaa bogagga iyo codsiyada ugu fiican halkaas oo aan ka soo dejisan karno darbiyada daaqadaha Windows oo aan tiro lahayn
Sida si joogto ah looga saaro McAfee gudaha Windows
Waxaan kuu sheegi doonnaa sida ugu wanaagsan ee aad u tirtiri karto McAfee si aad awood ugu yeelatid inaad ku beddesho antivirus kale oo ka fiican oo ka sii hufan.
Tivify: sida loo daawado in ka badan 80 kanaal oo TV ah bilaash iyo khadka tooska ah
Baro Tivify, oo ah barxad isu keenta lacag la’aan iyo bixinta TV-yada iyo waliba fiidiyowga adeegyada dalabyada
5-ta barnaamij ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay naqshadeynta garaafka xirfadeed
Ma jeceshahay inaad ogaato kuwa ugu fiican barnaamijyada naqshadeynta garaafka? Qormadan waxaan ku tusaynaa sida ugu wanaagsan ee xilligan loo joogo.
Waa maxay kumbiyuutarka ugu horeeya dunida goorma ayaa la sii daayay?
Maanta ficil ahaan waa wax aan macquul aheyn in la qiyaaso noolaanshaha kumbiyuutar la'aan. In kasta oo dad badani soo maraan oo aan ...
Palantir ma shaqeynayo: maxaa la sameeyaa si loo saxo?
Palantir ma shaqeynayo? Qodobkaan, waxaan ku hagaajin doonnaa qaar ka mid ah khaladaadka ugu badan ee keena in Palantir uusan shaqeyn.
Sida loo tirtiro Microsoft Edge iyo maxay yihiin waxyaalaheeda kale
Ma xiisaynaysaa inaad ogaato sida loo masaxo Microsoft Edge? Qodobkaan waad ka heli doontaa waxaan sidoo kale isku dayi doonaa inaanan dib u dhigin markale.
Sidee looga saaraa xayeysiinta pop-up-ka ee ku jirta Google Chrome maxaase waxyeello u leh
Haddii aad ku daashay boggaga xun ee foosha xun ee Chrome iyo daalacashada kale soo bandhigaan, waa tan sida aad uga saari karto
Waa maxay Microsoft Edge iyo maxay kaga duwan tahay daalacayaasha kale
Haddii aadan wali aqoon waxa Microsoft Edge yahay, qodobkaan waxaad ku baran doontaa oo waxaad ku ogaan doontaa kuwa kala duwan ee kula tartamaya.
Halkee laga daawan karaa Ciyaaraha Olombikada Tokyo 2021 oo toos loogu noolaado
Haddii aad rabto inaad ku aragto Ciyaaraha Olombikada Tokyo 2020 oo BILAASH ah oo aad noolaan karto, halkan waxaan ku tusaynaa dhammaan xulashooyinka la heli karo. Ha moogaanin iyaga!
Top 9 Ciyaartoyda IPTV ee Windows
Ma waxaad raadineysaa windows iptv player? Halkan waxaan ku arki doonnaa kuwa ugu fiican ee aad gacanta ku hayso, oo leh faa'iidooyinkooda iyo khasaarahooda.
Halkee lagala soo baxaa buugaagta jacaylka casriga ah
Maqaalkan waxaan ku tusaynaa bogagga ugu wanaagsan bogagga aad ka soo dejisan karto buugaagta jacaylka casriga ah
Xaqiiji dhibaatada: "VLC ma awoodo inuu furo MRL"
Waxaan leenahay xalka khaladka "VLC ma awoodo inuu furo MRL" markii la isku dayayo in la furo fayl ama la ciyaaro fiidiyow.
Sida loo saxo khaladaadka PR_CONNECT_RESET_ERROR
Waxaan falanqeyneynaa sababaha qaladka PR_CONNECT_RESET_ERROR iyo qaababka aan ku xallin karno.
Chrome ayaa iskiis u xirta: waa maxay sababta tan u dhaceyso iyo sida looga fogaado?
Haddii Chrome uu xirmo kaliya waxaa sababi kara dhibaatooyin kala duwan, dhibaatooyin aan kugu tusinay qodobkaan oo ay la socdaan xalka.
Wax ka beddelka IP-ga kombuyuutarradeena, taleefannada casriga ah, kiniin ama qalab kasta waa habsocod aad u dhakhso badan oo fudud adoo raacaya tallaabooyinkan.
Wareegyada fiidiyoowga ah ee fiidiyoowgu waxay noqdeen wax ka badan inta caadiga ah ee adeegsadayaal badan, aaladaha ...
DonTorrent: 6da kale ee ugu wanaagsan ee lagu soo dejin karo durdur sanadka 2021
Raadi kuwee websaydhada ugu fiican ee laga soo dejisto durdur marka DonTorrent ay ku guuldareysato. Beddelka ugu fiican halkan.
Sidaad Uheli Karto Netflix Adigoon Dhigin Kaarkaaga Deynta
Sidee loo helaa Netflix iyada oo aan lahayn kaarka deynta? Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo sameeyo. Waxaan kuugu sharxeynaa tuducyada soo socda.
Sida Gmail loogu dhigo desktop-ka si dhakhso loogu helo
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato sida loo dhigo gmail-ka dusha kombuyuutarkaaga maxaa yeelay waa macmiilkaaga ugu isticmaalka badan maalin walba, kani waa maqaalkaaga.
Sida loo joojiyo ama loo joojiyo VoLTE wicitaankaaga moobaylka
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo demiyo VoLTE si looga gaaro waxqabad wanaagsan taleefankaaga gacanta (in kasta oo faa'iidooyinkiisu muuqdaan)
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo joojiyo Avast si markaa kombiyuutarkaaga uu ugu shaqeeyo xawaare dheereeya oo aan lahayn xusuusiyeyaasha dhibsada ee fayraska
Si tartiib tartiib ah, ciyaaraha fiidiyowga ee fiidiyoowga ah ayaa sii lumanaya. Weli waad u jeclaan kartaa taas, waxaan ku baraynaa sida loo kaydiyo ciyaaraha Flash-ka kombuyutarkaaga.
Soo hel mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo Airbnb si aad awood ugu yeelato inaad fasax ku gasho qiimo jaban.
Sida loo abuuro wada hadal kooxeed barta 'Instagram'
Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo abuuro kooxo wada sheekeysi ah oo u dhexeeya dhowr xubnood oo ku yaal Instagram qaab fudud.
Sida loo tirtiro akoonkaaga Gmail gebi ahaanba
Tirtiridda koontada 'Gmail' waa geedi socod aad u dhakhso badan, laakiin ka hor inta aan la sameyn, waa inaan tixgelin siino wax kasta oo tan ay tilmaamayso.
Waa maxay viruska IDP.generic iyo sida looga saaro
Haddii aad u baahan tahay inaad ogaato waxa loo yaqaan 'idp.generic' iyo sida aad uga saari karto kombuyuutarkaaga, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa tallaabooyinka aad raaci karto.
Waa maxay autoKMS iyo sidee looga saaraa?
Dhowr sano ka hor, ka saarista AutoKMS waxay ahayd hawl aad uga dhameystiran tan maanta, maaddaama aan u baahanahay ...
Opera vs Chrome, keebaa browser fiican?
Opera vs Chrome waa su'aasha aan wada qabno. Midkee la isticmaalayaa? Halkan waxaan kaaga tagi doonaa isbarbardhigga u dhexeeya daalacashada xilligan.
Halkee lagala soo bixi karaa buugaag bilaash ah si sharci ah
Nala joog si aad u ogaato bogagga ugu fiican ee lagu soo dejisan karo buugaag si sharci ah.
Waa maxay yourphone.exe iyo sidee looga saaraa?
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa taleefankaaga taleefanka ee loo yaqaan 'yourphone.exe' yahay, waxa loogu talagalay iyo haddii ay mudan tahay in laga saaro kombuyuutarkaaga, waxa ugu horreeya ...
Grantorrent wuu xirmay: waxyaabaha ugu fiican ee lagu daawado taxanaha iyo filimada
Grantorrent waa la xiray. Qoraalkan waxaan ku tusi doonnaa beddelka ugu wanaagsan ee lagu daawan karo taxanaha iyo filimada gebi ahaanba bilaashka ah ee sharciga ah.
Soo ogow wada sheekaysiga bulshada ee ugu fiican si aad ula kulanto dad cusub, ula wadaagto dhacdooyinka, u hesho waqti madadaalo ah ama ku shukaansato
Ka dib markii lagu dhawaaqay xiritaanka Yahoo Answers, waxaa la joogaa waqtigii la raadin lahaa waxyaabo kale. Maqaalkani waxaan ku tusineynaa 8 beddel ee ugu wanaagsan ee barnaamijkan
Sida muusikada fiidiyow loogu dhejiyo barnaamijyadan bilaashka ah
Muusigga oo fiidiyoow lagaa caawiyo oo keliya kaa caawin maayo inaad ka sii qurux badnaato, ama aad u xiiso badan. Waxay sidoo kale u adeegi doontaa inay siiso taabasho xirfad leh.
10 Beddelka loo yaqaan 'Divxatope': Maxay mar dambe u shaqeyn weydaa?
Hadda waxay umuuqataa in dariiqa guusha ay soo afjartay, malaayiin isticmaaleyaal ah ayaa raadinaya waxyaabo kale oo Divxatope ah.
Sidee u shaqeeyaa daabacaha 3D?
Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa sida ay u shaqeyso daabacaad 3D ah iyo waxa loo isticmaali karo.
"Kuma xirmi karo shabakadan" Windows 10, maxaa la sameeyaa?
"Kuma xirmi karo shabakaddan" waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhaca Windows 10. Aan aragno sida loo saxo.
Dhammaan wixii ku saabsan DMZ: waa maxay, waxa loogu talagalay iyo maxay yihiin faa'iidooyinkiisa
DMZ waa fikrad si dhow ugu xiran amniga kombuyuutarka. Qoraalka xiga waxaan kuugu sheegi doonaa wuxuu yahay, waxa loogu talagalay iyo dhammaan faa'iidooyinkiisa.
Waa maxay feylka DXF sideen u furi karaa?
Maanta waxaan diirada saareynaa faylasha DXF, waxaan kusoo bandhigeynaa waxa ay ka koobantahay iyo sida aad ugu furi karto si aad uga faa iideysato.
Maxay yihiin Shabakada Madow iyo Webka Qoto dheer
90% dhammaan macluumaadka laga helo internetka si guud looma heli karo waxaana loo yaqaan 'Deep Web'
Kuwani waa beddelaadaha ugu sarreeya ee Hamachi, barnaamijka ugu caansan ee bilaashka ah ee shabakadda gaarka loo leeyahay (VPN) muddooyinkii ugu dambeeyay.
Qoraalkan waxaan dib u eegeynaa waxa 5-ta ugu wanaagsan ee WinRar ee bilaashka ah ee Windows ee maanta la heli karo.
Kuwani waxaa loo tixgeliyaa taxanaha ugu fiican taariikhda
Qoraalkan waxaan ku tusi doonaa waxa aan u aragno inuu yahay taxanaha ugu fiican taariikhda ee ay tahay inaadan seegin.
Waa maxay SSD drive adag? 5 fure si loo fahmo
Maxay yihiin diskiyada SSD-ka iyo 5 fure si aad si fiican u fahanto waxa loogu talagalay
Sida loo soo degsado fiidiyowyada Twitter-ka barnaamij la'aan iyo bilaash
Qormadan waxaan ku faahfaahin doonnaa degelladaas oo aan si fudud oo bilaash ah uga soo dejisan karno fiidiyowyada Twitter-ka.
AntiSpyware: waa maxay oo maxay yihiin barnaamijyada ugu fiican ee looga hortago
Haddii aad rabto inaad ka hortagto kombuyuutarkaagu inuu noqdo isha macluumaadka ee asxaabta dadka kale, barnaamijyadan antispyware-ga ah waad ku guuleysan doontaa.
Waxaan ku baraynaa inaad ogaato cidda taleefankaaga kuugu soo wacda websaydhyada iyo codsiyada ugu fiican suuqa, nala soo hel.
3 nooc ee ugu caansan ee aan ka helno suuqa waa VA, IPS iyo TN. Qodobkaan waxaan ku dooneynaa inaan wax ku fududeyno.
Sida loo sameeyo dusha sare ee mobilada Digi Mobil
Haddii aad rabto inaad dib u buuxiso moobiilkaaga Digi Mobil oo aadan hubin sida loo sameeyo, qodobkan waxaan ku tusaynaa dhammaan xulashooyinka jira.
Waa maxay WiFi Dongle ama USB Dongle maxaase loogu talagalay?
Dongle, oo aan u tarjumi karno adabtarada, waa aalad elektiroonig ah oo yar oo ku xiran mid ka weyn ...
Soo ogow farqiga u dhexeeya WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger iyo Messages marka la eego asturnaanta iyo shaqeynta.
Haddii aad u maleyneyso in la gaadhay waqtigii loo wareegi lahaa Signal, qodobkan waxaan ku tusi doonaa tabaha ugu fiican ee looga faa'iideysan karo
Waa maxay calaamadda maxaa qof walbana ugu socdaa
Haddii aadan caddeyn waxa uu yahay farriinta farriinta calaamadaha iyo waxa ay na siiso si ka duwan WhatsApp, qoraalkan waxaan kaaga saari doonnaa shakigaaga
Haddii ay jiraan nooc nooga dhaca saacadaha iyo saacadaha nolosha bulshada, ka dhigaysa saaxiibbadeen inay is weydiiyaan ...
20 Shabakado si loo soo dejiyo eBooks bilaash ah oo sharci ah
Mar dambe cudurdaar uma lihid inaad akhriso buug cusub. Waxaan kuu soo bandhigeynaa 20ka degel ee ugu fiican si aad u soo dejiso eBooks bilaash ah oo gebi ahaanba sharci ah.
Nala baro annaga kuwaas oo ah bogagga ugu fiican ee aad kala soo bixi karto joornaalada PDF-ka oo bilaash ah kuna raaxee mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto
Kaydinta faylasha daruuraha waa ciil dhan. Waxaan kuugu tuseynaa adeegyada kaydinta daruuraha bilaashka ah ee hal guji kaliya.
Waa maxay KMSpico? Waa amaan?
Waxaan ku tusineynaa waxa KMSpico yahay iyo haddii ay gebi ahaanba amaan tahay in lagu hawlgeliyo Windows iyo Microsoft Office qalabkan.
Kaydinta daruur isku dhafan: Waa maxay, Tilmaamaha iyo Tusaalooyinka
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa daruur isku dhafan ay tahay, waxa loogu talagalay iyo tusaalooyinka isticmaalka, waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriso maqaalkan.
Google muxuu iga ogyahay aniga sidee shirkadani kuu ogtahay?
Haddii aad had iyo jeer la yaabban tahay inta ay Google kaa og tahay adiga, qodobkan waxaan ku tusinaynaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad ku ogaan karto uguna hawlgeli karto si waafaqsan.
Qodobkaan waxaan ku faahfaahin doonnaa oo aan ku soo bandhigi doonnaa xulashooyinka ugu fiican ee lagu ciyaaro chess-ka guriga kombiyuutarka.
Waxaan hilmaamay lambarkayga sirta ah ee Wi-Fi, maxaan sameeyaa
Haddii aan ilownay furahayaga Wi-Fi, waxaan si fudud ugu ogaan karnaa tabahaan.
Koorsooyinka ugufiican ee lagu barto Ingiriisiga khadka tooska ah iyo bilaashka ah
Ma u baahan tahay inaad barato Ingiriisiga oo aadan aqoon meesha aad ka bilaabeysid? Waxaan ku baraneynaa koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee lagu barto Ingiriiska.
Waxay kuxirantahay boosteejada emaylka ee aan isticmaalno, waa macquul inaad tirtirto emayl aan horey u dirnay hadii aan deg degno.
Ciyaaraha kaararka ugu fiican ee lagu ciyaaro bilaash iyo khadka tooska ah
Waxaan leenahay ciyaaro kaararka nooc kasta leh. Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa cayaaraha aan u maleyneyno inay yihiin kuwa ugufiican ee loo qeybiyo gebi ahaanba khadka tooska ah ee internetka.
Barnaamijyada ugufiican si aad ugudhaqaajiso xakameynta waalidka madal kasta
Ma rabtaa in ilmahaaga la ilaaliyo markuu internetka ka socdo? Waxaan ku tusineynaa barnaamijyada ugu fiican ee lagu kiciyo xakameynta waalidka.
Sida SMS-ka lacag la’aan looga diro goobahan
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida aad ugu diri karto SMS gebi ahaanba bilaash mahadnaqa boggaga internetka ee aan helnay.
Sideen ku ogaan karaa qofka isoo wacay hadaanan haysan badbaadin?
Waxaan ku arki doonnaa qodobkaan qaababka loo adeegsado in lagu ogaado asalka lambarrada aan la aqoon iyo in la ogaado cidda na soo wacday.
Kumbuyuutarkaygu kaligiis wuu xidhaa: maxay u dhacdaa?
Kombuyuutarkaagu miyuu sii xirmayaa taas oo keeneysa inaad lumiso dhammaan shaqadii aad soo qabatay? Tani waxay sababi kartaa sababo kala duwan, ...
Ku xidhan internet la'aan: Maxay u dhacdaa iyo sida loo xaliyo?
Waxaa jira dhibaatooyin dhowr ah oo saameyn ku yeelan kara howlaha shabakad marka qalabku ku xirmo internet la'aan
Joornaalada bilaashka ah ee Isbaanishka: halka laga soo dejisto noocyada ugu fiican
Halkee looga soo dejisan karaa joornaalada Isbaanishka si bilaash ah, qaab fudud. La kulan joornaal aad u wanaagsan oo aad ku aqrin karto iyaga oo ku qoran PDF.
Sidee loo kordhiyaa calaamadaha WiFi? Xal wax ku ool ah
WiFi wuxuu noqday mid muhiim u ah guriga sida warqadda musqusha, biyaha ...
Waa maxay iyo sida loo ogaado waxa SSID ee shabakadaada Wi-Fi
Kahor soo ifbixinta isku xirnaanta wireless, shabakadaha kombiyuutarka waxaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo fiilooyinka ethernet, isku xirnaanta jirka iyadoo loo marayo ...
Sida loo muujiyo faylasha qarsoon ee ku jira Mac
Mac-keena wuxuu ka koobanyahay faylal qarsoon. Maqaalkani waxaan ku ogaan doonnaa sida loo muujiyo faylasha qarsoon ee Mac qaab fudud.
Dhibaatooyinka badanaa soo noqnoqda ee Safari iyo sida loo saxo
Waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo noqnoqda ee Safari iyo xulashooyinka qaarkood sida loo xaliyo Mac-gaaga
Sida loo qasbo in la xiro barnaamij ama barnaamij ku saabsan Mac
Uma aha sida caadiga ah sida caadiga ah ee Windows, MacOS kama reeban xaqiiqda ah in barnaamij ama codsi ...
Emulators-ka ugu fiican ee bilaashka ah ee loogu talagalay 'MacOS'
Xulasho ka mid ah kuwa ugu fiican emulators Android ee loogu talagalay MacOS ee aan ka heli karno internetka, gebi ahaanba waa bilaash.
Waxaan ku tusineynaa sida aad u abuuri karto emayl ku meel gaar ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo ansax ah in laga diiwaan geliyo bogagga shabakadda.
Waxaa jira dhowr waddo oo shaashadda looga sameeyo macOS mid walbana wuu naga caawin karaa iyadoo kuxiran xaaladda. Qodobkaan waxaan ku tusi doonnaa iyaga.
Sida loo ogaado haddii aan virus ku haysto iphone iyo sida looga saaro
Iphone-ka iyo fayruusku iskuma xirna hal jumlad, waxay leedahay xoogaa nuglaansho ah maqaalkan waxaan ku ogaan doonnaa sida loo xalliyo.
Maqaalkan waxaan ku arki doonnaa halka laga soo dejinayo istiikarada WhatsApp ee loogu talagalay iPhone, iyo sidoo kale in la abuuro oo markaa la siiyo taabasho shaqsiyeed.
Maareeyayaasha sirta ah ee bilaashka ah
Markii aan haysanno lambarro badan oo sir ah, waxay noqoneysaa wax aan macquul ahayn in la xafido dhammaantood, taasi waa sababta aan kuugu keenayno liiska maamulayaasha furaha sirta ugu fiican.
Waa maxay labada barnaamij oo maxay u yihiin? tani waa waxa aan ku sharaxeyno kuna qeexeyno maqaalkan, iyo sidoo kale sida loo abuuro.
Epublibre ma shaqeyneyso: hubi xulashooyinkaan bilaashka ah
Epublibre mar dambe ma shaqeyso Ma dhammaatay in la soo degsado buugaag bilaash ah oo qaab dijitaal ah? Waxba kama ahan taas, halkan waxaan ku tusineynaa xulashooyinka ugu fiican.
Waxaa jira dad badan oo naga mid ah oo aan dooneynin inay ku tiirsanaadaan internetka si ay u ciyaaraan ciyaaro qaar ka mid ah, halkan waxaan ku soo bandhigeynaa 10ka kulan ee khadka tooska ah ee ugu soo jiidashada badan.
Miyaynu jecel nahay inaan ogaano cidda wax ka weydiisay astaanteenna? Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa sida loo ogaado cidda booqata boggayaga iyadoo aan la arkin.
Xog wareejinta: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waa maxay xogta wareegaya maxaase loogu talagalay? Sideen u hawlgeliyaa ama u hawlgeliyaa? Miyaan ku isticmaali karaa moobilkeyga meel ka baxsan dalkayga? Wax walba waan kuu sheegeynaa.
Sidee loo arkaa furaha sirta ah ee aad kaydisay Google Chrome?
Ma rabtaa inaad aragto, wax ka beddesho ama tirtirto lambarkaaga sirta ah ee ku jira Google Chrome? Halkan waxaan ku sharaxeynaa meesha laga helo iyo sida loo sameeyo.
HDMI wireless-ka: muxuu wali ugu jirin fashionka?
HDMI Wireless, wax jira laakiin ay adag tahay in qofna ka warqabo, joog si aad wax badan uga barato tikniyoolajiyadan iyo guuldaradeeda.
Sida loo joojiyo muuqaalka "Find My iPhone"
Raadi iphonekeyga waa astaamo faa iido leh oo Apple ay ku dhexjirto qalabkeeda. Casharkaan waxaan ku sharaxeynaa talaabo talaabo talaabo ah sida loo furo.
Sida loo wadaago WiFi inta udhaxeysa aaladaha: PC, Android iyo iOS
Maanta waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah xulashooyinka aan heli karno si aan ula wadaagno xiriirka WiFi ee u dhexeeya qalabkayaga Android, iOS ama PC.
Muxuu yahay biraawsarka ugu fiican kombuyuutarkaaga?
Browser-ka shabakaddu waa waligiisna wuxuu ahaa aalad aasaasi u ah kombuyuutarradeena, waxaan dooneynaa inaan baarno waxa ugu fiican iyo dhammaan faa'iidooyinkooda.
Haddii aad raadineysid antivirus bilaash ah oo bilaash ah Windows 10, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa ugufiican ✅ Bilaash ✅ La cusbooneysiiyay ✅ Caymiska.
Furaha sirta adag: tilmaamaha ay tahay inaad raacdo
Waxaan ku tusineynaa sida loo doorto lambarka sirta ah ee aaminka ah tilmaamo qaarkood oo ay tahay inaad raacdo iyo tilmaamo kale oo xiisaha u ah amnigaaga.
Chrome ayaa gaabis ah? Tan waxaa u sababi kara sababo badan, maqaalkan waxaan ku faahfaahin doonaa sida loo xaliyo loona dedejiyo fulinta.
Maxay yihiin buskudka maxaase loogu talagalay
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin buskudyada iyo waxa loogu talagalay. Marka waxaad ku badbaadi kartaa shabakadda oo waad ogtahay waxaad aqbasho degel kasta.
Waa maxay phishing iyo sida looga fogaado in lagu khiyaaneeyo?
Waxaan ku tusaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato phishing ama xatooyo aqoonsi si aadan ugu dhicin dabinka. Waa maxay, tusaalooyinka iyo digniinta.
Waa maxay Chromecast sideese u shaqaysaa?
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Chromecast iyo sida ay u shaqeyso si aad uga faa’iideysato casrigaaga iyo TV-gaaga.